Managing TCS IsiZulu
SARS Home > Client Segments > Individuals > Manage your Tax Compliance Status > Managing TCS IsiZulu
​UKUSINGATHA ISIMO SAKHO SENTOBELO-NTELA KWABAKWA-SARS
Emizamweni yethu eqhubekayo yokuphucula nokwenza kube lula kumkhokhintela ukusingatha izindaba zakhe zentela, Uphiko lweNgenisomali eNingizimu Afrika (uSARS) luzoqala Uhlelo oluphuculiwe lweSimo seNtobelo-ntela (Tax Compliance Status System).
Ukuthobela imithetho kanye ‘nokukhokha eyakho ingxenye’ akuyona nje kuphela into ekulungele, kepha kunegalelo ekukhuleni okuhle komnotho wezwe nokuphetha ngokuhlomulisa bonke abantu baseNingizimu Afrika.
Uhlelo olusha luzokwenza kube lula ukuthola Isitifiketi Sobumsulwa KwezeNtela (TCC) futhi luzovumela abakhokhintela ukuba bathole iNombolomfihlo
Ngokuhambela igatsha lakwa-SARS
INombolomfihlo ye-TCS ingasetshenziswa yilabo osebenzisana nabo esikhundleni se-TCC ukuze baqinisekise isimo sakho sentobelo-ntela kwi-inthenethi nge-eFiling. Abakwa-SARS banenjongo yokusuka ekusebenziseni indlela Yesitifiketi Sobumsulwa KwezeNtela kuthi ngokuzayo kube luhlelo lweSimo Sentobelo-Ntela kanye neNombolomfihlo olusebenzayo.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi isimo sentobelo-ntela somkhokhintela kasimi ndawonye siguquguquka ngokuhambisana nokuqhubeka kwakhe ukuthobela izidingo zokuthela.
Unalokhu kuwe, ukuze ube ngoyithobelayo imithetho kufanele uqiniseke ukuthi:
Kakukho zimbuyiselo zentela eziselele emuva.
Kawukweleti mali kwa-SARS ngaphandle uma sekwenziwe izinhlelo zokukhokha noma sekunesivumelwano sokulengiselwa isikweletu
Usuzibhalisile zonke izinhlobo zentela okufanele uzithelele.
Imininingwane yakho ebhalisiwe yonke iyiyona yona. Ngeminye iminingwanwane ngokuhlela imininingwane yakho cindezela lapha.
Usudidiyele (ngo-Merge tool kwi-eFiling) noma usukudalulile ( efomini i-ERC01 nelikhona njengengxenye yohlelo lwe-TCS kwi-eFiling), zonke izinombolonkomba zakho zentela. Ngeminye iminingwane Ngokudidiyela, cindezela lapha.
Uhlelo olusha lwe-TCS luphaswe yikhethelo lika-“MyCompliance Profile (MCP)”. I-MCP inika umkhokhintela ithuba lokubuka isimo sakhe sentobelo-ntela nge-inthanethi njengokuba sidalulwe ngu-SARS ukuze akwazi ukulungisa ukungathobi okuhlonziwe. Ukwethulwa kwe-MCP kumandlisa abakhokhintela ngolwazi olwengeziwe mayelana nokuthobela kwabo imigomo yentela futhi kuyisiqalo sokususwa kohlelo leSitifiketi Sobumsulwa KwezeNtela futhi kuyisisekelo sesimo esiphelele sokuthoba esikhishwa ngokubhekwa kwezicelo ze-TCS (isibonelo njengokweThenda kumbe Okobumsulwa kanye nokunye)
Ngeminye imininingwan ngohlelo lwesimo sentobelo-ntela landela le migudu engezansi:
Ngningangena kanjani ku “My Compliance Profile” (MCP) yakwa- SARS nge-eFiling
Ngangisicela kanjani Isimo Sentobelo-ntela sami
Ngingasiqinisekisa kanjani Isimo Sentobelo-ntela sami
Last Updated: 03/06/2016 3:12 PM ​